Puntland oo Dhaqan-galinaysa Ruqsadda Wadidda Gaadiidka. – Radio Daljir
Puntland oo Dhaqan-galinaysa Ruqsadda Wadidda Gaadiidka.
Garowe, Jan 29 – Dawladda Puntland ayaa sheegtay in Puntland laga dhaqan-galin doono ruqsadda wadidda gaadiidka tallabadaas oo wax looga qabanayo khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca leh ee ka yimaada waddooyinka iyo gaadiidka. Go?aankan waxa maanta ku dhawaaqay taliyaha ciidanka nabad-galyada waddooyinka Puntland Gaashaanlle sare Axmed Cabdi Cali.
Shir jaraa?id oo uu xafiiskiisa ku qabtay ayuu taliyuhu ku sheegay in kadib baaritaan iyo u dhabba-gal ay ku sameeyeen khasaaraha tirada badan ee ka dhaca waddooyinka ay inta badan sababsadaan aqoon-darro wayn oo haysata wadayaasha gaadiidka.
Taliyuhu waxa kale oo uu ka hadlay in 10 askari oo dhinaca ammaanka waddooyinka ah lagu soo daray ciidamada ka hawl-gala magaalada caasimadda ah ee Garowe. Taliyaha ayaa arintaa ku macneeyay in, kadib markii la ballaariyay qaar ka mid ah waddooyinka magaalada, ay ayaamahan soo bateen gawaari magaalada dhexdeeda ku socda xawaare aad u dhereeya.
Wadayaasha ayaa waxa lagu adkeeyay in ay tix-galiyaan hadba meesha ay marayaan isla markaana ixtiraamaan tabbeelayaasha iyo tusayaasha xawaaraha waddooyinka si loo badbaadiyo nafta iyo hantida muwaadiniinta.
Tallaabadan lagu shariciyaynayo qaadashada ruqsada wadidda gawaarida ayaa noqonaysa tii labaad ee laga qaado dhinaca ammaanka waddooyinka iyo gaadiidka Puntland. Sannadkii 2009-kii ayaa dhammaan gaadiidka Puntland waxa lagu soo rogay in loo diiwaan-galiyo si casri ah oo electronic ah, taasoo meesha ka saartay in ay Puntland dhex maraan baabuur aan la aqoon jihada laga leeyahay.
Mashruuca diiwaan-galinta gaadiidka ayaa waxa hirgaliyay shirkad si gaar ah oo leeyahay oo la shaqeeysa had?aydaha dawliga ah ee sida gaarka ah ugu xilsaaran arimaha gaadiidka iyo diiwaan-galintooda.